ပုံတုံးတုံး တီရှပ်လက်ရှည်ကို ငှက်မွေးလေးနဲ့အလှဆင်မယ်
မဝတ်ချင်လို့ သိမ်းထားရတဲ့ တီရှပ်လက်ရှည်တွေရှိလား?
ဝယ်တုန်းကတော့ ဘာကိုမျက်စိကျမိမှန်းမသိ ဝယ်လာမိတယ်။ တကယ်ဝတ်တော့မယ်ဆိုမှ စတစ်ကာမပါ၊ အလှဆင်ထားတာ တစ်ခုမှမပါတဲ့ တီရှပ်လက်ရှည်ဟာ ဘယ်လိုမှစိတ်တိုင်းမကျတော့ဘူး။ အရောင်ဆန်းဆန်းလေးဆိုလည်းတော်သေး။ အရောင်ကလည်း ဘာမှမထူးဘူးဆိုရင်တော့ အိမ်နေရင်းပဲ ချဝတ်လိုက်ရတော့မလား? No!!!! အပေါစားမှမဟုတ်တာ အိမ်နေရင်းဝတ်လိုက်ရမှာ နှမျောစရာကြီးနော်။ နည်းနည်းလောက် အိုင်ဒီယာထုတ်ကြည့်ရအောင်။ ငှက်မွေးလေးကို သုံးပြီးတော့ ဒီဇိုင်းမိုက်မိုက်လေးဖြစ်လာအောင်လုပ်ကြမယ်။
ငှက်မွေးတု/ မွေးပွဖဲပြား နှစ်သက်ရာတစ်ခုခုကို ရွေးလိုက်ပါ။ အကျႌရဲ့အရောင်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်တဲ့ ငှက်မွေးကိုရွေးဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်။ ကော်သုတ်တဲ့ဂန်း (hot glue gun) နဲ့ ကပ်ကြေးတို့လည်း လိုတယ်။ ဒါလေးတွေရှိရင် ရပြီ။
မွေးပွလေးတွေက ဒီအတိုင်းလာတာမဟုတ်ဘဲ ပိတ်စပေါ်မှာ ကပ်ထားတာဆိုတော့ သုံးရလွယ်ပါတယ်။ နှစ်ဖက်လုံး အရွယ်အစားတူအောင် ကပ်ကြေးနဲ့ညှပ်လိုက်ပါ။ ပခုံးပေါ်မှာ တပ်မှာဆိုတော့ နှစ်ဖက်လုံး ညီနေဖို့အတွက် နေရာကို ချိတ်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ခဲတံလေးနဲ့တို့ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် မှတ်သားထားရမယ်။
အကျႌပေါ်က အမှတ်အသားနေရာပေါ်ကို ကော်ကပ်တဲ့ဂန်းနဲ့ ကော်ကပ်ပေးရပါမယ်။ Glue Gun နဲ့ သုံးတာက ပိုသပ်ရပ်တယ်၊ လက်လည်းမပေဘူး။ ကော်သုတ်ပြီးရင် အမွေးလေးကို ကပ်လိုက်ပေးရုံပဲ။
ကြည့်ပါဦး.... ဒီလိုမျိုးလေး ဖြစ်သွားပြီ။ အကျႌဒီဇိုင်းက ရိုးတယ်လို့ ပြောလို့မရတော့ဘူး။ ပခုံးပေါ်က အမွေးလေးတွေကြောင့် သူများတွေတောင် အာရုံစိုက်ပြီးကြည့်တာခံရဦးမှာ။
Photos : One_O